‘मैले प्रहरीहरुलाई कुटेको छैन बरु मलाई भ्यानको पछाडि बुटैबुटले कुटे”,ठमेलमा युवकले प्रहरी पिटियो भनेको खबर पछी यी युवकले खोले वास्तविकता ! « Sajha Page
‘मैले प्रहरीहरुलाई कुटेको छैन बरु मलाई भ्यानको पछाडि बुटैबुटले कुटे”,ठमेलमा युवकले प्रहरी पिटियो भनेको खबर पछी यी युवकले खोले वास्तविकता !
काठमाडौं,०७ चैत । राजधानीको ठमेलबाट प्रहरीलाई कुटपिट गरेको अभियोगमा प्रहरीले २५ वर्षीय सुगम बमलाई पक्राउ गरेको थियो । यो समाचार विभिन्न अनलाईन मिडियाहरुमा आएपछि पिडित सुगम बम हाम्रै कार्यलयमा आएका छन् भने सम्प्रेसश गरिएको सो समाचार झुठो रहेको बताएका छन् ।
-यो भिडियो हेर्नुहोस :